Mupurisa Anopa Huchapupu Munyaya yaVaBiti Iri Mudare
Mumwe wevachuchusi panyaya iri kupomerwa mutungamiri wePeople's Democratic Party, VaTendai Biti, VaMichael Reza, vadeedza mufakazi wavo mukuru panyaya iyi, Chief Superintendent Jelous Nyabasa veZimbabwe Republic Police, avo vaudza dare kuti VaBiti vakasungwa zviri pamutemo kudivi reZimbabwe pamuganhu weZimbabwe neZambia svondo rapfuura.
VaNyabasa vaudzawo dare kuti vane makore makumi maviri nemanomwe vari pabasa ravo rechipurisa.
Vati sekuzviva kwavo pane nzira mbiri dzekusunga munhu uye nzira idzi dzinosanganisira kusunga munhu paine gwaro rinenge rabva kudare kana kuti warrant of arrest kana kusunga munhu kana paine fungidziro inogutsa kuti munhu akapara mhosva.
VaNyabasa vati pavakasunga VaBiti vakavaratidza magwaro avo ebasa ravo pamwe nezvikonzero zvavaivasungira uye vati vakaita zvese izvi vachitevedza mutemo wenyika.
Asi rimwe remagweta ari kumirira VaBiti, VaHarrison Nkomo, vati havasi kubvimirana nezviri kutaurwa nemapurisa kuti VaBiti vakasungwa zviri pamutemo vachiti VaBiti vakatorwa nechisimba kubva kuZambia uko vainge vaenda kunotsva hupoteri uye kodzero dzavo dzakambunyikidzwa.
Magweta aVaBiti ari kutarisirwa kubvunzurudza VaNyabasa neChina apo anoti achabvunzurudza mufakazi uyu pamwe nekuburitsa pachena kuti VaBiti vakatorwa kuZambia zvisiri pamutemo.
VaBiti vakaisa chikumbiro chekuti dare risatombonzwe nyaya yavo sezvo vasina mhosva yavakapara.
VaBiti vakabuda munyika neChitatu chapfuura vachityira hupenyu hwavo mushure mekunge vanhu vanofungidzirwa kuti mauto vavashungurudza ivo nemhuri yavo neshamwari dzavo.
VaBiti vakatsvaga hupoteri kuZambia paChirundu Border Post asi vanoti vakatorwa kuZambia nechisimba nemapurisa, mauto nevasori vakadzorwa kuZimbabwe nemusi China.
Zvese izvi zvakaitika kunyange hazvo VaBiti vainge vanzi nedare repamusoro muZambia vagare munyika iyi chikumbiro chavo chehupoteri chichiongororwa.
America yakashoropodza zvikuru zvakaitwa neZambia, uye sangano reUnited Nations High Commission for Refugees rakaburitsawo mashoko richiti Zambia inofanirwa kuremekedza mitemo yepasi rose inobata vapoteri.
Svondo rapfuura, VaBiti vakaudza dare kuti vaifanira kunge vasiri muZimbabwe uye kunyange dai Zambia yainge isingade kuvapa hupoteri, South Africa neNorway dzainge dzabvuma kuvatambira, nokudaro vaifanira kuregwa vachienda kuSouth Africa kana kuNorway.
Nyaya iyi iri kuenderera mberi neChina apo magweta aVaBiti achabvunzurudza VaNyabasa.